မြန်မာတွေ ပြန်ပြီး အတု ယူ သင့်လှ တဲ့ အသံ ချဲ့ စက်တွေ လော်စ ပီကာေ တွ လုံး ဝ မ ပါ တဲ့ သူ များ နိုင် ငံ က ကထိန်ပွဲလေး – Shwe Wiki News
Shwe Wiki News
Homepage / Local News / မြန်မာတွေ ပြန်ပြီး အတု ယူ သင့်လှ တဲ့ အသံ ချဲ့ စက်တွေ လော်စ ပီကာေ တွ လုံး ဝ မ ပါ တဲ့ သူ များ နိုင် ငံ က ကထိန်ပွဲလေး
မြန်မာတွေ ပြန်ပြီး အတု ယူ သင့်လှ တဲ့ အသံ ချဲ့ စက်တွေ လော်စ ပီကာေ တွ လုံး ဝ မ ပါ တဲ့ သူ များ နိုင် ငံ က ကထိန်ပွဲလေး
By Ali BaBaPosted on November 9, 2019
ကျနော် တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ အလှူဆိုလည်း လော်စပီကာ..ကထိန်ဆိုလည်း လော်စပီကာနဲ့ သီချင်းတွေ တရားတွေဖွင့်တတ်ကြပါတယ်….အလှူမှာ ကထိန်မှာ လော်စပီကာဖွင့်တာကို အပြစ်မပြောကြပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ လော်စပီကာကို အချိန်မတော်ထိ အကျယ်ကြီးဖွင့်တာ…ပတ်ဝန်းကျင် မခံသာအောင် ဆူညံစွာဖွင့်ပြီး အရက်သေစာသောက်စား ကခုန်တာေ တွ ပြုလုပ်လာတာကြောင့် ဝေဖန်မှုတွေလည်း ရှိခဲ့သလို လော်စပီကာအကျယ်ကြီးဖွင့်လို့ ရန်ပွဲတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ပြဿနာသတင်းတွေကို လည်း မကြာခဏတွေ့ရှိရ ပါတယ်…
ဒါ့ကြောင့် လော်စပီကာကို ဆူညံစွာဖွင့်ရင် တိုင်ကြားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေလည်း ထုတ်ပြန်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်…ယခုဖော်ပြပေးချင်တာကတော့ အင်တာနက်မှာ လူတွေချီးကျူးနေကြတဲ့ လော်စပီကာမပါတဲ့ တစ်ခြားနိုင်ငံက ကထိန်ပွဲ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးအကြောင်း ပါ….
အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်လေးထဲမှာတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေဟာ လော်စပီကာမပါဘဲ ရိုးရာအိုးစည်ဗုံမောင်းတွေကို တီးခတ်ပြီး ဘုရားပုံတော်တွေကိုင် သာသနာ့အလံတွေကိုင်ကာ စီတန်းပြီး ကထိန်ခင်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. အဲလိုတီးခတ်ရာမှာလည်း ဆူညံစွာတီးခတ်တာမဟုတ်ဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေတဲ့ အသံမျိုးနဲ့သာ ထိန်းသိမ်းတီးခတ်သွားတာ တွေ့ရပါ တယ်…
ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ကြည့်ရှုရသူတွေကတော့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာလည်း လော်စပီကာတွေ အကျယ်ကြီးမဖွင့်ဘဲ အဲဒီလိုမျိုးလေး ကထိန်လှည့်ကြ မယ်ဆို ကောင်းမှာပဲ… ဒီလိုမျိုးတွေကို အတုယူသင့်တယ်လို့ မှတ်ချက်စကားတွေ ပြောထားကြတာကိုတွေ့ရှိရပါ တယ်…
ပရိသတ်ကြီးတို့ရော လော်စပီကာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးချင်ကြပါသလဲ…အောက်မှာ အဲဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတ ယ်ေ နာ်….
လူ မှု ကွန် ရက် မှာ မိန်းကလေးေ တွ မေ တာ် မ ရာတွေ လှန်ပြပြီး ငွေ ရှာ လာ မှုတွေ ရှိလာ
ရည်းစာ ငှား သည် တ စ်နှစ်မြန်မာငွေ သိန်း( ၁၂၀၀ )ပေး မည် ဆိုပြီး ကြော်ငြာ ထားေ သာ အမျိုးသမီးလေး
ပဟေ ဠိ များ စွာ နဲ့ (၆) တ န်းကျောင်း သူလေး တစ်ဦး ကြိုး ဆွဲ ချသေဆုံး မှု ဖြစ်စဉ်
Previous post လူငယ် စတိုင်လ် လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ ဝတ် ဆင် ထား တာကြောင့် ဆယ်ကျော် သက်လေး လို အရမ်း လှပနေ တဲ့ မိုးဟေကို
Next post ကျိုက် ထီး ရိုး ဘုရားေ ပါ် တွင် ဈေး သည် များ နှင့် ဂေါပ က အဖွဲ့များ ပြဿ နာ ထပ်မံဖြစ် (ရုပ်သံဖိုင်)
Shwe Wiki News Website isaDaily News Blog and We provides Latest Local and International News, Celebrity News , Knowledge and Life Style. Articles are Display in Both Zawgyi and Unicode Text, Videos and Photos.
တစ် ကမ္ဘာလုံး အင် တာ နက် အခမဲ့ သုံး လို ရနိုင်အောင် လမ်း ဖွင့်ပေး မယ့် သူ Elon Musk
Prd-Wedding ပုံ ရိ ပ်ေ လးတွေ ကို ထုတ်ပြ လိုက် တဲ့ ခြူးေ လး
Copyright © 2019. Created by ShweWiki News.